Wayenesithembu Ngoku Ungumyeni Olungileyo | IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKorea IsiLithuania IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
KWAKUTHENI ukuze indoda eyayinesithembu neyayichasa amaNgqina kaYehova ibe liNgqina? Yintoni eyabangela ukuba umfundisi weCawa Yomoya atshintshe iinkolelo zakhe? Yintoni eyanceda ibhinqa elalikhuliswe kakubi layeka ukuzithiya lasondela kuThixo? Kwakutheni ukuze umntu othanda umculo ongxolayo abe liNgqina likaYehova? Funda ezi ngxelo ukuze ufumane iimpendulo.
“Ngoku Ndingumyeni Olungileyo.”—URIGOBERT HOUETO
UNYAKA WOKUZALWA: 1941
UBOMI BANGAPHAMBILI: WAYENESITHEMBU, ECHASA AMANGQINA KAYEHOVA
NdingowaseCotonou, isixeko esikhulu saseBenin. Ndakhula ndihamba kwicawa yamaKatolika kodwa ndandingakhuthelanga. Amarhamente amaninzi amaKatolika kwindawo endandihlala kuyo ayenabafazi abaninzi, ekubeni isithembu sasivumelekile ngoko. Ndaba nabafazi abane.
Xa kwaqaliswa ukulwelwa inkululeko ngeminyaka yee-1970, ndandicinga ukuba ilizwe lam liza kuncedakala. Ndazijul’ ijacu kulo mzabalazo nakwezopolitiko. AmaNgqina kaYehova ayengathandwa ekubeni ayengoondilele kwezopolitiko. Nam ndandiwatshutshisa. Ukugxothwa kwabathunywa bevangeli ngowe-1976, ndandicinga ukuba awanakuze abuye.
Umzabalazo waphela ngowe-1990. Andizange ndikholelwe xa abathunywa bevangeli bamaNgqina bebuya kwakhona. Ndaqalisa ukucinga ukuba mhlawumbi uThixo unabo. Malunga nelo xesha, ndatshintsha umsebenzi. Omnye wabantu endandisebenza nabo wayeliNgqina yaye akazange alibazise, wandishumayeza. Wandibonisa iivesi zeBhayibhile ezibonisa uYehova njengoThixo wothando nokusesikweni. (Duteronomi 32:4; 1 Yohane 4:8) Ndazithanda ezo mpawu. Ndandifuna ukufunda ngakumbi ngoYehova, ndavuma ukuqhutyelwa isifundo seBhayibhile.
Kungekudala ndaqalisa ukuya kwiintlanganiso zamaNgqina kaYehova. Ndachukunyiswa yindlela awayethandana ngayo ngokungazenzisiyo—ayengacalulani ngokwebala okanye umgangatho wentlalo. Okukhona ndandinxulumana namaNgqina, kokukhona kwakubonakala ukuba ngabalandeli bakaYesu bokwenyaniso.—Yohane 13:35.
Ndagqiba ekubeni ukuba ndifuna ukukhonza uYehova, kuza kufuneka ndiyishiye iCawa yamaKatolika. Kwakungelulanga, kuba ndandisoyika ukuba baza kuthini abantu. Emva kwexesha elide, uYehova wandinceda ndaqweba inkalipho ndaza ndarhoxa ecaweni.
Kwakufuneka ndenze olunye utshintsho olukhulu. Njengoko ndandifunda iBhayibhile, ndafumanisa ukuba uThixo akasifuni isithembu. (Genesis 2:18-24; Mateyu 19:4-6) Emehlweni akhe, yayingumtshato wokuqala kuphela owamkelekileyo. Ndabhalisa lo mtshato kwabasemagunyeni ndabandulula abanye abafazi, ndaqinisekisa ukuba bayanyanyekelwa. Ekuhambeni kwexesha, ababini kwaba bafazi baba ngamaNgqina kaYehova.
Nangona umfazi wam esengumKatolika, uyasihlonela isigqibo sam sokukhonza uYehova. Uyavuma ukuba ngoku ndingumyeni olunge ngakumbi.
Ndandidla ngokucinga ukuba ndingakwazi ukuphucula intlalo yabantu bakuthi ndisebenzisa ezopolitiko, kodwa ndiye ndabona ukuba loo nto ililize. Ngoku ndiyabona ukuba buBukumkani bukaThixo kuphela isicombululo kwiingxaki zoluntu. (Mateyu 6:9, 10) Ndinombulelo ongazenzisiyo kuYehova ngokundibonisa indlela yokuphila ubomi obonwabileyo.
“Kwakungelulanga Ukwenza Iinguqu.”—UALEX LEMOS SILVA
UNYAKA WOKUZALWA: 1977
UBOMI BANGAPHAMBILI: WAYENGUMFUNDISI KWICAWA YOMOYA
Ndakhulela ecaleni kwedolophu yaseItu, eSão Paulo. Eli candelo ledolophu lalidume ngolwaphulo mthetho.
Ndandithanda ugonyamelo nokuziphatha kakubi. Ndandiphinda ndibandakanyeke nasekuthengiseni iziyobisi. Ekuhambeni kwexesha ndaqonda ukuba le ndlela ndiphila ngayo iza kundenza ndiphelele entolongweni okanye engcwabeni; ndaza ndohlukana nayo. Ndahamba kwiCawa Yomoya, ekugqibeleni ndaba ngumfundisi.
Ndandivakalelwa kukuba ndinokusebenzisa icawa ukuze ndincede abantu. Ndandide ndisasaze inkqubo yonqulo kwisikhululo sikanomathotholo sasekuhlaleni nto leyo eyandenza ndaziwa kakhulu. Ekuhambeni kwexesha ndabona ukuba icawa ayiwakhathalelanga amarhamente ayo—ndingasathethi ke ngokuzukisa uThixo. Ndandivakalelwa kukuba eyona nto iphambili kukwenza imali. Ndagqiba ekubeni ndirhoxe ecaweni.
Ukuqalisa kwam ukufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova, ndabona zisuka ukuba ohlukile kwezinye iinkonzo. Zimbini izinto ezibalaseleyo endazibonayo. Okokuqala amaNgqina kaYehova akathethi nje ngokuthanda uThixo nommelwane; olo thando ayalubonisa. Okwesibini awabandakanyeki kwezopolitiko okanye kwiimfazwe. (Isaya 2:4) Ezo zibakala zibini zandenza ndabona ukuba ndandilufumene unqulo lokwenyaniso—indlela emxinwa esa kubomi obungunaphakade.—Mateyu 7:13, 14.
Ndaqonda ukuba, ukuba ndifuna ukukholisa uThixo, kufuneka ndenze iinguqu ezinkulu. Kwakufuneka ndichithe ixesha elingakumbi nentsapho yam. Kwakufuneka ndithobeke ngakumbi. Kwakungelulanga ukwenza ezo nguqu, kodwa uYehova wandinceda. Umfazi wam wazithanda kakhulu ezi nguqu. Wayeqalise ukufunda iBhayibhile ngaphambi kwam, kodwa ngoku wenza inkqubela ngokukhawuleza. Sobabini sasisazi ukuba sifuna ukuba ngamaNgqina kaYehova. Sabhaptizwa ngemini enye.
Mna nomfazi wam sivuyiswa kukuba siye sakwazi ukunceda abantwana bethu abathathu bakwazi ukuba nobuhlobo noYehova. Siyintsapho eyonwabileyo. Ndinombulelo kuYehova ngokunditsalela kwinyaniso eseLizwini lakhe, iBhayibhile. Eneneni iyabutshintsha ubomi babantu! Loo nto ibonakala apha kum.
“Ndiziva Ndicocekile, Ndiphilile Yaye Ndonwabile.”—UVICTORIA TONG
UBOMI BANGAPHAMBILI: WAKHULA KABUHLUNGU
Ndakhulela eNewcastle, eNew South Wales. Ndingoyena umdala kubantwana abasixhenxe, utata wayenogonyamelo elinxila nomama enogonyamelo. Umama wayendibetha endithuka. Wayesoloko endixelela ukuba andilunganga yaye ndiza kutsha esihogweni. Ezo zinto zazindoyikisa.
Ngenxa yokubethwa ngumama ndandidla ngokungayi esikolweni. Xa ndandineminyaka eli-11 ubudala, ndathathwa ekhaya ndasiwa kwiziko likarhulumente lokunyamekela abantwana, kamva ndasiwa kwikhaya loonongendi. Xa ndandineminyaka eli-14 ubudala, ndazimela. Ndandingafuni ukubuyela ekhaya, ngenxa yoko ndahlala kwizitrato zaseKings Cross, idolophu yaseSydney.
Ngoxa ndandisahlala ezitratweni, ndasebenzisa iziyobisi, utywala ndiziphethe kakubi. Esinye isiganeko sandoyikisa. Ndandihlala kwigumbi lomnini wedisko. Ngolunye urhatya, kwafika amadoda amabini eze kumbona. Wathi mandiye kwigumbi lokulala, kodwa ndandibeva njengoko babethetha. Le ndoda yayifuna ukundithengisa kula madoda mabini. Ayeza kundifihla enqanaweni eyayiza kundisa eJapan ukuze ndisebenze ebharini apho. Ndatsiba ngefestile, ndabaleka.
Ndabona indoda eyayityelele eSydney, ndayichazela imeko yam ndicinga ukuba iza kundipha imali. Kunoko yandisa kwindawo eyayihlala kuyo ukuze ndihlambe ndize ndifumane into etyiwayo. Ndasuka ndahlalisana nayo. Satshata emva konyaka.
Ukuqalisa kwam ukufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova, ndandididekile. Ndacaphuka ndakufumanisa ukuba nguSathana obangela ubungendawo; ndandifundiswe ukuba nguThixo obangela ukuba sibandezeleke. Kwatsho kweeqabu uNoqolomba ndisakwazi ukuba akukho mntu utshiswa esihogweni, imfundiso eyayindoyikisa ukususela ebuntwaneni.
Ndayithanda kakhulu into yokuba amaNgqina esekela izigqibo zawo eBhayibhileni. Aphila ngokuvisisana nezinto azikholelwayo. Ndandingumntu onenkani, kodwa enoba ndandisenza ntoni okanye ndisithini, ayesoloko endiphatha ngothando nangentlonelo.
Eyona nto eyandikhathaza kakhulu kukuziva ndingento yanto. Ndandizicaphukela, ndaqhubeka ndivakalelwa ngaloo ndlela nasemva kwexesha elide ndibhaptiziwe. Ndandisazi ukuba ndiyamthanda uYehova, kodwa ndandiqinisekile ukuba akanakuze amthande umntu onjengam.
Izinto zatshintsha emva kweminyaka eli-15 ndibhaptiziwe. Kwintetho eyayinikelwa kwiHolo YoBukumkani yamaNgqina kaYehova, isithethi sabhekisela kuYakobi 1:23, 24. Ezo vesi zifanisa iLizwi likaThixo nesipili esinokuzibona kuso ngendlela uYehova asijonga ngayo. Ndaqalisa ukuzibuza enoba indlela endandizijonga ngayo yayahlukile na kwindlela andijonga ngayo uYehova. Ekuqaleni ndaxhathisa. Ndandivakalelwa kukuba uYehova wayengafanelanga andithande.
Emva kweentsuku ezingephi ndafunda isibhalo esatshintsha ubomi bam. Loo vesi nguIsaya 1:18, apho kucatshulwa uYehova esithi: “Yizani, ke, silungelelanise imicimbi phakathi kwethu. . . . Nangona izono zenu zingqombela, ziya kwenziwa mhlophe njengekhephu.” Ndavakalelwa ngokungathi uYehova wayethetha nam esithi: “Yiza, Vicky silungelelanise imicimbi phakathi kwethu. Ndiyakwazi, ndiyazazi izono zakho, ndiyayazi nentliziyo yakho—nakuba kunjalo, ndiyakuthanda.”
Andizange ndikwazi ukulala ngobo busuku. Ndandisathandabuza ukuba uYehova angandithanda, kodwa ndaqalisa ukucamngca ngedini lentlawulelo likaYesu. Kwatsho kweeqwenge ndabona ukuba uYehova ebenomonde, endibonisa ukuba uyandithanda ngeendlela ezininzi. Kodwa kwakungathi ndithi kuye: “Awundithandi ngokwaneleyo. Idini lentlawulelo loNyana wakho alanelanga kum.” Kwakungathi idini lentlawulelo ndilibuyisela kuYehova. Kodwa ngoku ekugqibeleni, ekubeni ndiye ndacamngca ngesipho sedini lentlawulelo, ndiziva ndithandwa nguYehova.
Ndiziva ndicocekile, ndiphilile yaye ndonwabile. Ndonwabe ngakumbi emtshatweni wam yaye kuyandivuyisa ukusebenzisa amava am ukuze ndincede abanye. Ndiya ndisondela ngakumbi kuYehova.
“Yayiyimpendulo Yomthandazo Wam.”—USERGEY BOTANKIN
UBOMI BANGAPHAMBILI: WAYETHANDA UMCULO ONGXOLAYO
Ndazalelwa eVotkinsk, indawo awazalelwa kuyo umqambi odumileyo uPyotr Ilich Tchaikovsky. Intsapho yakowethu yayingathathi ntweni. Utata wayeneempawu ezininzi ezintle, kodwa ekubeni wayelinxila, kwakusoloko kukho iingxwabangxwaba ekhaya.
Ndandingaqhubi kakuhle esikolweni yaye njengoko iminyaka yayihamba, ndaziva ndingento yanto. Ndandizikhetha ebantwini kuba ndingabathembi. Kwakungemnandanga ukuya esikolweni. Ngokomzekelo, xa kufuneka ndenze ingxelo, ndandingakwazi ukuchaza nawona magama alula endandidla ngokuwachaza lula ngamanye amaxesha. Ukupasa kwam ibanga le-6, ingxelo yayisithi: “Akaphangalelanga ngolwazi, loo nto imenza angakwazi ukusebenzisa amagama afanelekileyo okuchaza izinto.” Loo mazwi andityumza andishiya ndiludwayi. Ndaqalisa ukuzibuza ukuba iyintoni injongo yobomi bam.
Xa ndandikwishumi elivisayo ndaqalisa ukusela. Ekuqaleni xa ndisele ndandisonwaba. Kodwa ndandisithi ndakusela kakhulu, ndibe nomvandedwa. Ubomi bam babubonakala bungenanjongo. Ndaqalisa ukudandatheka, maxa wambi ndingaphumi endlwini iintsuku eziliqela. Ndacinga ngokuzibulala.
Xa ndandineminyaka engama-20 ubudala, ndafumana isiqabu. Ndathi phithi ngumculo ongxolayo. Wawundihlaziya kakhulu lo mculo yaye ndakhangela abanye abantu ababewuphulaphula. Ndakhulisa iinwele, ndagqobhoza iindlebe ndaza ndanxiba njengeemvumi endandizithanda. Njengoko ixesha lihamba, ndaba nguphuma silwe, ndingakhathali yaye ndandisoloko ndixambulisana nentsapho yam.
Ndandicinga ukuba ukuphulaphula lo mculo kuza kundonwabisa, kodwa ayizange yenzeke loo nto. Ndanditshintshile! Xa ndafumanisa izinto ezimbi ngezi mvumi zidumileyo endandizithanda, ndaziva ndingcatshiwe.
Ndaphinda ndacinga nzulu ngokuzibulala. Ekuphela kwento eyandithintelayo kukucinga ngomama nendlela eyayiza kumphatha ngayo loo nto. Wayendithanda kakhulu yaye zininzi izinto awayendenzele zona. Yayibuhlungu imeko endandikuyo. Ndandingafuni ukuqhubeka ndiphila, kodwa ndandingakwazi ukuzibulala.
Ukuze ndiphelise ezo ngcinga, ndaqalisa ukufunda iincwadi zakudala zaseRashiya. Elinye ibali lalithetha ngekroti elalikhonza kwinkonzo ethile. Ndaba nomnqweno onamandla wokufuna ukwenzela uThixo nabanye abantu izinto ezintle. Ndazityand’ igila kuThixo ngomthandazo, into endingazange ndiyenze ngaphambili. Ndacela uThixo ukuba andibonise indlela endinokubuphila ngayo ubomi obunenjongo. Njengoko ndandithandaza ndafumana isiqabu. Into eyalandela emva koko yandothusa. Emva kweeyure nje ezimbini, iNgqina likaYehova lankqonkqoza kwam laza lacela ukundiqhubela isifundo seBhayibhile. Ndikholelwa ukuba le yayiyimpendulo yomthandazo wam. Ukususela ngaloo mini, ndaqalisa ukonwaba ebomini.
Nangona kwakunzima, ndawulahla wonke umculo wam nezinto ezinokuthanani nawo. Kodwa kwathatha ixesha elide ngaphambi kokuba ndiwulibale umculo. Nanini na ndidlula kwindawo edlala loo mculo, wawundikhumbuza ngexesha elidluleyo. Ndandingafuni ukuphazamisa amava amnandi endinawo ngezo nkumbulo. Ndayeka ukudlula kwezo ndawo. Nanini na ezo ngcinga zifika, ndandithandaza. Ukwenza loo nto kwandinceda ndaluva “uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda.”—Filipi 4:7.
Njengoko ndifunda iBhayibhile, ndafunda ukuba amaKristu amele achazele abanye izinto azikholelwayo. (Mateyu 28:19, 20) Ndandizixelela ukuba andinakuze ndiyenze loo nto. Kwangaxeshanye, izinto endandizifunda zazindonwabisa zindenza ndibe seluxolweni. Ndandisazi ukuba abanye abantu nabo kufuneka bayifunde le nyaniso. Nangona ndandisoyika, ndaqalisa ukuthetha nabanye ngezinto endandizifunda. Yandothusa into yokuba ukuthetha nabanye abantu ngeBhayibhile kundenze ndizithembe ngakumbi. Kwakhona kwazenza zendela ezi nkolelo entliziyweni yam.
Ngoku nditshatile, ndonwabile kwaye ndiye ndavuyiswa kukunceda abantu abaninzi bafunda iBhayibhile kuquka udadewethu nomama. Ukukhonza uThixo nokunceda abanye bafunde ngaye kuye kwandenza ndaphila ubomi obunenjongo.
IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu—Indoda Eyayikade Inesithembu Ngoku Ingumyeni Olungileyo